सन्यास लिएपछि अब धोनीले के गर्दैछन् ? - सिम्रिक खबर
सन्यास लिएपछि अब धोनीले के गर्दैछन् ?
भारतमा क्रिकेटकाक पुर्वकप्तान एमएस धोनीले क्रिकेटबाट सन्यास लिएको घोषणा गरेसँगै अब उनले के गर्लान भन्ने चर्चा र चासो सर्वत्र छ ।
उनले आइपिएल लिग खेल्ने छन् । त्यही पनि केही महिना । त्यसपछि उनी अब के गर्लान त ?
धोनीले अब टेरिटोरियल आर्मीसँग बढी समय बिताउने कुरा चर्चामा छ ।
एमएस धोनीका साथी र व्यापारिक साझेदार अरुण पाण्डेले भनेका छन्, ‘मलाई थाहा थियो कि उनी चाँडै रिटायर हुनेछन्, तर मलाई ठ्याक्कै समय थाहा थिएन। तथापि, उनीले निर्णय गरे। उनले यस बर्षको सुरुवातमै आइपिएल हुन्छ भन्ने सोँचेर तयारी शुरु गरेका थिए, तर विचमै स्थगन भयो । त्यसपछि टी २० ट्वान्टी विश्व कप पनि अर्को बर्षको लागि स्थगित गरियो। त्यसैले उनी मानसिक रुपमा स्वतन्त्र भएको सोचे। ‘
धोनीको सेना प्रेम
धोनी टेरिटोरियल आर्मीका लेफ्टिनेन्ट कर्नल हुन्। उनले आर्मीमा मानर्थ डिग्री लिए। २०१९ विश्वकप पछि, धोनीले प्यारासुट रेजिमेन्टसँग एक महिना बिताए।
पाण्डे भन्छन्, ‘एउटा कुरा भने पक्का छ कि अब उनी सेनामा बढी समय बिताउनेछन्, त्यस्तै ऊ आफ्नो व्यवसाय र अन्य प्रतिबद्धताहरुमा पनि ध्यान दिन सक्षम हुनेछ। हामी चाँडै सँगै बसेर अगाडि बढ्ने छौं। धेरै जसो अवस्थाहरूमा, सेवानिवृत्त भएपछि खेलाडीको ब्रान्डको मान घट्छ, तर पाण्डेलाई लाग्छ कि धोनीको सन्दर्भमा यस्तो हुँदैन।’
पाण्डेले भने, ‘२०१९ देखि हामीले १० नयाँ कम्पनीसँग सम्झौता गरेका छौं र यी दीर्घकालीन सम्झौताहरू हुन्। यो अझ जारी रहनेछ, किनकि धोनी एक क्रिकेटर मात्र होइन, युवा आइकन हुन् । उनले आगामी दुई तीन मौसममा आईपीएल खेल्नेछन्। अब ऊ स्वतन्त्र छ। टी २०विश्वकप स्थगन हुनु पनि निश्चित रूपमा उनको सेवानिवृत्ति को एक कारक भएको छ।’
धोनीले १५ अगष्टमा सोशल मिडिया पोष्टमार्फत आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटलाई बिदाइ दिएको बताएका थिए । एजेन्सी
लिभरपुल एटलान्टासँग २-० ले पराजित
विश्वप्रसिद्ध फुटबलर डिएगो म्याराडोनाको ६० वर्षको उमेरमा निधन
रेसलिङ लेजेण्ड द अण्डरटेकरले डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिभर्सबाट लिए सन्यास
राष्ट्रिय टोलीको बन्द प्रशिक्षणमा सहभागी भएर अष्ट्रेलिया जाँदै सन्दीप लामिछाने
खेलाडी क्रिस्टियानो रोनाल्डोलाई फेरी भित्र्याउन म्यानचेस्टर युनाइटेडको अफर
फ्रान्स फिनल्यान्डसँग २–० गोलले पराजित